Umpheki namathiphu ezidlo zikaKhisimusi | Isolezwe
Umpheki namathiphu ezidlo zikaKhisimusi
intandokazi / 21 December 2018, 12:59pm / ZANELE MTHETHWA
UNGASEBENZISA izithako onazo ekhabetheni ukupheka izidlo ozethulelwa uNkk Zanele van Zyl ongumpheki nombhali wencwadi ethi Cooking With Zanele
BANINGI abasacabanga ukuthi bazothathani bahlanganise nani ngoKhisimusi njengoba kudlisa izibiliboco. Kujwayelekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu bafune ukupheka okwehlukile, kungabi yizidlo ezijwayelekile. Umpheki uNkk Zanele van Zyl osanda kwethula incwadi ethi Cooking With Zanele, unamathiphu ezinye izidlo ezihlabahlosile ezingajatshulelwa umndeni ngalo Khisimusi. UNkk van Zyl ophinde asebenze nabakwaSpekko, usiphathele izidlo ongazenzela zona ngalo Khisimusi, okukhona ne-dessert ehlukile.
“Izidlo engizikhethile ezingadingi izithako eziningi,” echaza.
1. Inkukhu echochobalisiwe
* Inkomishi yeButtermilk noma amasi
*125ml weLemon juice
*10ml Whole grain mustard
*10ml Chicken spice
*15ml weFresh rosemary eqotshiwe
* Amaqhezu amathathu ka-garlic ogayiwe
Endishini enkulu xuba izithako bese ugcoba inkukhu ngaphandle nangaphakathi. Goqa inkukhu ngephepha lokubhaka (foil) bese uyifaka kuhhavini upheke imizuzu engu-45. Susa i-foil uphinde upheke imizuzu engu-15 ize ishintshe umbala inkukhu. Ungayiphaka ne-rice noma imifino.
Apricot Jam Gammon
2. Apricot Jam Gammon
*2 kg weGammon
* U-carrot ombili oqotshiwe
* Izigaxa ezimbili zika-anyanisi obomvu
* Ilitha yamanzi
* Uhhafu we-apricot jam
*250 ml we-Apple juice
*50g we-White rice vinegar
*50g kashukela onsundu
*15ml weBabercue Spice
* Uginger ogayiwe
Ebhodweni elikhulu bilisa iGammon kanye no-carrot no-anyanisi upheke imizuzu engu-30. Uma sekuvuthiwe beka eceleni kuphole. Ebhodweni hlanganisa ujamu, apple juice, ushukela, white rice vinegar, garlic, ginger, usawoti no-pepper. Yeka ebhodweni kuze kushube. Hluba isikhumba enyameni. Thela enyameni ingxube kajamu bese ufaka inyama kuhhavini ubeke ku-180 degrees.
Isaladi lethanga no-Beetroot
3. Isaladi lethanga no-beetroot
*500g wethanga eliqotshiwe
* Izigaxa ezine zikaBeetroot oqothiswe wabiliswa
*500g wamahlamvu kaLettuce
*60ml oweBalsamic Vinegar
*60ml we-Olive Oil
* IFeta cheese
Basa uhhavini uwubeke ku-180 degrees. Chelela ithanga ngo-olive oil bese ufaka kuhhavini imizuzu engu-15. Beka eceleni kuphole. Geza uBetroot ukuze ungavuzeli kwisaladi. Endishini enkulu ufake ithanga eselivuthiwe, uLettuce, Beetroot no-anyanisi. Xuba i-olive oil neBalsamic vinegar bese uvuvuzela kwisaladi, ubeke ngaphezulu iFeta cheese nezinhlamvu zethanga ukuze kubukeke kahle.
*2 Izinkomishi ezimbili zeCream cheese
*500g we-fresh berries
*1 Inkomishi yeCondensed milk
* Izinkomishi ezimbili zika-flour
Beka uhhavini ku-160 degrees. Esitsheni sokubhaka faka amabhisikisi ayizimvuthu afike esinqeni sesitsha. Xuba uflawa, ushukela, usawoti nebhotela bese ubhaka kuze kushintshe umbala bese uyapholisa.
Sebenzisa i-electric mixer ukuhlanganisa i-cream cheese, condensed milk nama-berries. Thela le ngxube kumabhisikidi ubeke efrijini kuze kuqine.Thela ngaphezulu amanye ama-berries.